Free Thinker: ကာမေသု မိစ္ဆာစာရာ
၂၀၀၉ ခုနှစ်ဆန်းပိုင်းက ကျွန်တော် ခွင့်ယူပြီး မြန်မာပြည် ခေတ္တပြန်သွားပါသည်။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ မြန်မာပြည်မှပြန်အလာ လေယာဉ်ပေါ်တွင် Sunday Times သတင်းစာ ယူဖတ်ပါသည်။ တနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်၍ ထုံးစံအတိုင်း Special Report ပါပါသည်။ Special Report များတွင် စိတ်ဝင်စားစရာ အကြောင်းအရာများ ပါတတ်၍ ကျွန်တော်လည်း ရှာဖတ်ရာတွင် လူမသိ၊ သူမသိ ခံစားသွားရသော စင်ကာပူမှ လူငယ်ကလေးများ ၏ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားခံရမှုအကြောင်း ရေးထားတာ ဖတ်ရ၏။
ထိုဆောင်းပါးကိုဖတ်ပြီး စင်ကာပူမှ မုဒိန်းမှုများအကြောင်းသိရတော့ ကျွန်တော် အတော်ပင်မျက်လုံးပြူးမိ သွားရပါ၏။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မုဒိန်းမှုကျူးလွန်သူများသည် ဖခင်အရင်း၊ အစ်ကိုအရင်း၊ ဦးလေးအရင်း၊ အဖိုးအေအရင်းများ ဖြစ်နေသောကြောင့်တည်း။ ပထွေးများလည်း ပါတော့ပါသည်။ အဖေအရင်းများထက် ရာခိုင်နှုံးပိုနည်းသည်။ ထူးဆန်းပါပေ့ ဆတွတ်ရယ် ဟု ဗိုက်ကလေးလိုသာ အော်လိုက်ချင်တော့သည်။
Report နာမည်နှင့် စာရေးသူအမည်ကို မှတ်မထားလိုက်မိပါ။ မူရင်းဆောင်းပါးဖတ်လိုသူများ 1/2/2009 Sunday Times Special Report ကို ရှာဖွေဖတ်ရှုကြပါ ခင်ဗျား။
Special Report တွင် ၁၉၉၉ ခုနှစ်က မိခင်တစ်ဦးသည် (မုဆိုးမ သို့မဟုတ် တစ်ခုလပ် ဟု ဖော်ပြမထားပါ) နောက်အိမ်ထောင်ပြုသည် ဆို၏။ သူအိမ်ထောင်ပြုအပြီး လေးလကြာသောအခါ အသက် ၁၁ နှစ်နှင့် ၁၃ နှစ်ရှိသူ သမီးနှစ်ဦးသည် ပထွေးဖြစ်သူ၏ မုဒိန်းကျင့်မှုကို ခံခဲ့ရသည်။ အသက် ၄၅ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သော ထို ပထွေးဖြစ်သူအား တရားရုံးမှ အမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်ဖြစ်သည့် ကြိမ်ဒါဏ် ၂၄ ချက်နှင့် ထောင်ဒါဏ် အနှစ် ၃၀ ချမှတ်ခဲ့သည်။
စင်ကာပူမှ (သတင်းပို့ခဲ့သည့်) မုဒိန်းမှုများမှာ -
၂၀၀၆ ခုနှစ်က - ၁၁၈ မှု
၂၀၀၇ ခုနှစ်က - ၁၂၉ မှု
၂၀၀၈ ခုနှစ်က - ၁၇၂ မှု - ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဂုဏ်ပျက်မည် စိုး၍သော်လည်းကောင်း၊ ကျူးလွန်သူသည် ဖခင် သို့မဟုတ် မောင်ဘွားများ ဖြစ်နေ၍သော်လည်းကောင်း ရှက်သဖြင့် သတင်းမပို့ပဲ ဖုံးကွယ်ထားသော အမှုများမှာ ထို့ထက် နှစ်ဆ သို့မဟုတ် သည့်ထက်ပင်ပိုကောင်း ပိုနိုင်ပါသေးသည်။
Ministry of Community Development, Youth and Sports (MCYS) ၏ ၂၀၀၅ ခုနှစ် စစ်တမ်းများအရ ကလေးသူငယ်များအား လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြစ်မှုကျူးလွန်မှုသည် ၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင် ၁၅ မှု၊ ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် ၁၇ မှု၊ ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် ၂၉ မှု၊ ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် ၃၂ မှု၊ ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် အမှု ၂၀ စသဖြင့် ဖြစ်ပါသည်။
MCYS က ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် မိသားစုဝင် သို့မဟုတ် မိမိနှင့် ဆွေမျိုးသားချင်း မကင်းသော သူများက မုဒိန်းကျင့်ခြင်း ခံရသည့် ကလေးသူငယ် ၈၀ ကို စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ရာ မုဒိန်းကောင်များ၏ ၄၀% သည် မိဘအရင်းအချာ၊ ၂၅ % မှာ ပထွေး၊ မိထွေးများ၊ ကျန် ၃၅% မှာ ညီအစ်ကို၊ မောင်နှမများနှင့် အခြားဆွေမျိုး သားချင်းများ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ မုဒိန်းမှု ၁၀ မှုအနက် ၈ မှုမှာ မိမိနှင့်သိကျွမ်းသောသူများက မုဒိန်းကျင့်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟုလည်း ဆိုပါသည်။
၂၀၀၁ ခုနှစ် စာရင်းဇယားများအရ မုဒိန်းမှု ၃၈ မှုအနက် ၂၈ မှုတွင် မုဒိန်းကျင့်ခံရသူများမှာ အသက် ၉ နှစ်နှင့်အောက် ကလေးသူငယ်များ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ ထို ၃၈ မှုတွင် မုဒိန်းကောင်များသည်ကား -
၇ ယောက်သည် ဦးလေး၊ ၂ ယောက်သည် အမေဖြစ်သူ၏ boyfriend၊ ၄ ယောက်သည် ဖခင်အရင်း၊ ၂ ယောက်သည် ပထွေး၊ ၁ ယောက်သည် အဖိုးအေ နှင့် ကျန်သည့် ၂၂ ယောက်ကား မျက်နှာစိမ်းများဖြစ်သည် ဟု ဆိုပါသည်။ (according to the IMH- Institute of Mental Health Report)
၁၉၈၁ ခုနှစ်ခန့်က ကျွန်တော်တို့မြို့ကလေးနှင့် မလှမ်းမကမ်းမှ ကျေးရွာတစ်ခုတွင် ဖခင်အရင်းမှ သမီးဖြစ်သူကို မုဒိန်းကျင့်သည်ဟူသောသတင်း သိုးသိုးသန့်သန့် ကြားခဲ့ရပါသည်။ ထိုစဉ်က ကျွန်တော့်မှာ ဟင်္သာတ ဒေသကောလိပ်တွင် ကျောင်းတက်နေသည်ဖြစ်ရာ ထိုသတင်း မှန်၊ မမှန်၊ မည်သို့ဆက်ဖြစ်သည် စသည်များကို မသိခဲ့ပါ။
ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းတွင် မိဘများကို အနန္တောအနန္တငါးပါးတွင် သွင်းလျှက် ဘုရားနှင့် တစ်ဂိုဏ်းထဲ ထားသည်ဖြစ်ရာ မိဘများက သားသမီးအရင်းအချာအပေါ် မုဒိန်းကျင့်သည်ဆိုသည်မှာ အင်မတိ အင်မတန် ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အတူ မိမိ၏ မောင်နှမသားချင်း၊ ဦးလေး ဆိုသူများက မိမိတို့၏ နှမ၊ တူမများကို မုဒိန်းကျင့်သည် ဆိုသည်ကိုလည်း ကြားရခဲပါသည်။ ကြားရဘို့မဆိုထားပါနှင့်။ ထိုကဲ့သို့ ရှိသည်ဆိုလျှင်ပင် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာများအဖို့ အင်မတန်ထူးဆန်းနေသည်ဟု ခံစားရမည် ထင်ပါသည်။ ထိုသူအားလည်း လူအစစ်မဟုတ်သူ၊ လူ့တိရိစ္ဆာန်အဖြစ် သတ်မှတ်ကြမှာ မလွဲပါပေ။
မြန်မာပြည်တွင်မူ မိဘဆွေမျိုးသားချင်းများကို စဉ်လျှက် တစိမ်းတရံဆံက မုဒိန်းကျင့်သည် ဆိုသော သတင်းကိုပင်လျှင် ရှားရှားပါးပါး မကြားရသလောက် ဖြစ်ပါသည်။ (ဖြစ်မည်ထင်ပါသည်။ ကျွန်တော့်မှာ စင်ကာပူတွင် အမြဲလိုလို နေသည်ဖြစ်၍ ထိုသတင်းများကို မသိတာများလားမဆိုနိုင်။ သို့သော် ကျွန်တော် စင်ကာပူမလာခင် မြန်မာပြည်မှာ နေစဉ်ကတဲက မုဒိန်းသတင်းများကို မကြာခဏမကြားမိဖူးပါ။)
ကျွန်တော်စင်ကာပူရောက်စ ၂၀၀၀ ခုနှစ်ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း မလေးရှားမှ ဖခင်ဖြစ်သူတစ်ဦး မိမိသမီးကို မုဒိန်းကျင့်သည်ဟု သတင်းဖတ်လိုက်ရပါသည်။ ထိုစဉ်က ထိုသတင်းသည် ကျွန်တော့်အဖို့ အလွန်ထူးဆန်း နေလျှက် ပထမ ယုံပင်မယုံမိပါ။ အလွန်လည်း အံ့သြတမော ဖြစ်ရပါသည်။
ကျွန်တော်ငယ်စဉ်က ပြစ်မှုမဂ္ဂဇင်း နှင့် မှုခင်းစုံဂျာနယ်များကို အမြဲလိုလို ဖတ်ရှုခဲ့ပါသည်။ ထိုမဂ္ဂဇင်း၊ ဂျာနယ်များထဲတွင် ရေးသားထားချက်များအရ ထောင်သားချင်းတူလျှင်သော်မှ လူသတ်သောသူ၊ ဓါးပြ၊ သူခိုး၊ ခါးပိုက်နှိုက်များကို သူလိုငါလို ဆက်ဆံလျှက် ပေါင်းသင်းကြသော်လည်း မုဒိန်းသမားကိုမူ လူရာမသွင်း၊ ရှုတ်ချကြလျှက် ၀ိုင်းကြဉ်ထားသည်ဟု သိရပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ရာဇ၀တ်မှု ကျူးလွန်တာခြင်းအတူတူ မုဒိန်းမှုမှာ အင်မတန် ယုတ်ညံ့လှသောအမှုဟု ကျွန်တော်တို့မြန်မာများ ခံယူထားကြောင်း ဖော်ပြနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အထက် special report တွင် အဘယ်ကြောင့် မိမိသားသမီး၊ နှမ၊ တူမများကို မုဒိန်းကျင့်ရသနည်း ဟူမူ အလွယ်၊ အချောင်ရသော သားကောင်ဖြစ်ခြင်း၊ မိမိသည် သူ့ဖခင်၊ မောင်ဘွားဖြစ်နေသဖြင့် ရှက်သဖြင့် ထုတ်ပြောမည် မဟုတ်ခြင်း၊ ဤကျူးလွန်မှုကို မိသားစု၏ ဂုဏ်သိက္ခာကြောင့် အခြားမိသားစုဝင်များကပါ ၀ိုင်းဝန်း ပိတ်ပင်ထားမည်ဖြစ်ခြင်း တို့ကြောင့် ဖြစ်သည် ဟု ဆိုပါသည်။
ကျွန်တော်ကတော့ ထိုမုဒိန်းမှုများဖြစ်ရခြင်းမှာ ယခုခေတ် မိန်းကလေးများ၏ မလုံမလဲ ၀တ်စားဆင်ယင်မှုများသည် အဓိကတရားခံဖြစ်သည် ဟု မြင်ပါသည်။ ထို့ပြင် လွတ်လပ်လှသော အင်တာနက်website များတွင် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဓါတ်ပုံ၊ ဗီဒီယိုများကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပေါပေါများများ ကြိုက်သလောက် ကြည့်လို့ရခြင်း၊ သူတို့လူနေမှုစနစ်တွင် မိန်းမတို့ဣနြေ္ဒ ရွှေပေးလို့မရ ဆိုတာ မရှိခြင်း၊ Girlfriend, boyfriend များထားသော အလေ့များခေတ်စားလာခြင်း၊ မိဘနှင့်သားသမီးအကြား အပြန်အလှန် ရိုသေလေးစားမှုမရှိခြင်း စသည်တို့ကြောင့် ဖြစ်မည် ထင်ပါသည်။
MCYS ကမူ ထိုကိစ္စများလျော့နည်းပပျောက်အောင် မည်သို့လုပ်ရမည်ကို ပညာပေးအစီအစဉ်များနှင့် တကွ ညွှန်ပြထားပါသည်။
အထက်ပါ report ကိုကြည့်လျှင် မုဒိန်းကောင်များ၏ ထက်ဝက်ခန့်မှာ ဖခင်အရင်းများ ဖြစ်နေသည်ကို ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ရာ တွေ့ရပါသည်။ ပထွေး၏ အန္တရာယ်သော်မှ သည့်လောက်မများ။
ယခုအခါ ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်တွင်လည်း ကောင်မကလေးများသည် နိုင်ငံခြားသူများကို အတုခိုးလျှက် ဖော်လို့ရတာ တဖြည်းဖြည်းနှင့် အကုန်ဖော်လာကြပြီ ဖြစ်ရာ မြန်မာဖခင်များသည်လည်း စင်ကာပူဖခင်များကို အတုမခိုးလာပါစေနှင့်ဟု ရင်တုန်ပန်းတုန် ဆုတောင်းမိပါသည်။ အနန္တောအနန္တငါးပါးဂိုဏ်းဝင် ဆိုသည့်ဂုဏ် ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်း ထားနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။
ကျွန်တော်တို့ မဟာပုရိသ ယောက်ျားဘသားများသည် ငါးပါးသီလမှ အခြားသောသီလများကို မထိန်းနိုင်သည် ဖြစ်စေကာမူ ကာမေသု မိစ္ဆာစာရ ကံကိုတော့ အသက်ထက်ဆုံးလုံခြုံစွာ ထိန်းနိုင်ကြပါစေ ဟု ဆန္ဒပြုမိပါသည်။
အခြားဖတ်စရာ - A Study of Alleged Rape Cases in Singapore by S.P.Sng and K.C.Ng (Published in Singapore Medical Journal, Vol. 19, No. 3. September 1978)
ဇွန် ၆၊ ၂၀၁၀ (တနင်္ဂနွေ)
Posted by အေးငြိမ်း at 5:46 PM